Izvo Zvinoitwa nezvisingaitwe zveHoridhe Branding Zvinoenderana ne99designs | Martech Zone
Husiku hwakanyarara, iwo madhiri ari kuoma, uye vatengi vako vari kuvhura zvikwama zvavo. Kana iwe uchikwanisa kuita rako rechiratidzo chikamu chenguva yavo yezororo nenzira yechisikigo uye inoyevedza, vanozokurangarira zvakanaka mukati megore Idzva. Heano mamwe anobatsira Ita nezvisingaitwe kuti zvikubatsire kufamba mwaka.
Ita: chengetedza huchokwadi hwako
Kana yako yakajairika midhiya nhepfenyuro ine majee asinganetsi, tweeting meseji meseji izere nezororo mufaro icharova vateereri vako kunge isinganzwisisike. Chengetedza zita rako mupfungwa sezvaunoona mazororo. Slip puns mumakadhi ako ezororo kana iwe uchiwanzotaurirana nekuseka. Uye kana iwe ukachengeta yakakomba yemakoni toni iyo yasara yegore, namatira kune echokwadi manzwiro kana G-yakatemwa kuseka mune zvako zororo zvinhu.
Usadaro: siya chero munhu kunze
Kunyangwe izvo zvaungade kutenda iwe Hallmark, havazi vese vanopemberera Kisimusi. Maererano ne bhenji Research, 92 muzana yevaAmerica vanocherechedza zororo. Kunze kwekunge mhando yako iri yekutenda-chengetedza, chengetedza kushambadzira kwako kwezororo zvakajairika kuitira kukwezva kune zana muzana revateereri vako. Shambadza "kutengesa kwezororo" pane "Kutengesa kweKisimusi," tumira makadhi achizivisa "Zvinofadza Zvese" uye tumira mameseji pane ako maficha enhau mhemberero dzekupemberera yega yega zororo yechando painosvika.
Kupa kwetsitsi kunobatsira kune yako mbiri karma uye yako yepazasi mutsara. Iyo nzira yekuisa zita rako kunze munharaunda yako uye kuita kuti vashandi vako vanzwe zvakanaka nezvekushandira kambani yakanaka.
Usasanganise chero epamusoro kushambadzira kana nzvimbo dzekutengesa muzororo rako kupa kuyedza; ine tacky uye yakajeka. Asi iwe unogona kuwana nzira dzekusonamira kusunga basa rako mune yako yerupo kupa. Semuenzaniso, grafiki yakasimba inogona kupa dhizaini uye anodhinda mapurogiramu yezviitiko zvemunharaunda zvezororo zviitiko kana kumhanyisa rondedzero yemakwikwi anopa mibairo yemahara webhusaiti dhizaini masevhisi evanotambura
Uye ita kuti vashandi vako vabatanidzwe! Kumbira mazano avo enzira dzekubatsira nharaunda mwaka uno wezororo. Unogona kutora mhuri dzinoshaya dzemuno nekuvapa zvipo nezvikafu, kana kupa vashandi zuva rekubhadharwa kuti vashandise zvipo zvekuputira zvechipo chemunharaunda kuti vagovere.
Usadaro: enda kupfuura
Kupisa kwezororo chaiko. Vanhu vazhinji vanonzwa kuremerwa uye kuneta sezvo Zvita achifora. Usaputire vatengi vako nezviyeuchidzo zveemail kana kukumbira vashandi vako kuti vasiye Mugovera wega wega kuti vashande pamabasa ako erudo. Uye kune zvese zvinoera, usaite kuti vashandi vako vashande kunonoka paKisimusi kana Evha Idzva Idzva kana uchikwanisa kuzvibatsira. Chikamu chebudiriro yekambani yako chinoenderana nekuchengetedza vashandi vakanaka vachifara.
Ita: tumira makadhi chaiwo
Sezvo hozhwa tsamba inoenda nenzira yema dinosaurs, kutumira makadhi chaiwo kunokupa iwe mukana wekumira kunze kwepakeji uye kuita kushambadzira kudiki. Gadzira pop-up kadhi, sanganisira izwi dambanemazwi rinoburitsa meseji yezororo kana kuunganidza yakanaka kolaji yevashandi vevashandi uye mhuka dzinovaraidza dzakapfeka ngowani dzezororo. Craft a yakatarwa meseji nezve vatengi vako uye bhizinesi, kana kupa chimwe chinhu icho vateereri vako chavanogona kushandisa. Sanganisira coupon yakanaka muna Ndira kana yakasarudzika magineti efriji.
Usadaro: kukanda pati yakaremara
Kana iwe uchimhanyisa bhizinesi-remunhu bhizinesi, husiku hwese inogona kuve yako hofisi hofisi hofisi. Asi neboka rakakura, kukanda chiitiko chezororo kunogona kubatsira kusimbisa hunhu hweboka - chero vanhu vachida kuenda. Rongedza chiitiko chisina kujairika, semutambo we laser tag mutambo kana bowling. Kana munhu wese ari muboka rako achifarira kunwa doro, tungamira kunzvimbo inochengeterwa doro yemuno kana winery. Ingova nechokwadi chekuti vanhu vasingade kutora chikamu muchiitiko ichi vanogona kuenda uye kunakidzwa.
Kana bhajeti yako ichingobvumidza iyo yekuzorora imba bash, funga kuisvetuka zvachose. Pane kudaro, rega vashandi vabude maawa mashoma apfuura kupfuura zvakajairwa uye vape makadhi ezvipo eresitorendi. Avo vanoda kuenda vanodya kunze pamwe chete, uye vamwe vanogona kunakidzwa nenguva yemahara yekuzorora.
Uchiri kutsunga kubata yechinyakare hofisi pati? Ronga pamusoro peChishanu manheru pedyo nekutanga kwaZvita. Mapati evhiki husiku akaomera vabereki vakabatikana kubata, uye vashandi vanogona kunge vaine zvimwe zvirongwa kupera kwemwedzi kunosvika.
Ita: pfeka nzvimbo yako
SaWhos pasi muWhoville, buritsa zvishongedzo zvako musimba. Iwe unogona kushamisika kuti zvikuru sei kugashira imwe hofisi yedhiribhi inonzwa pamwe netambo shoma dzemagetsi anopenya, mamwe zvinomera zvine mavara, kenduru rine huni uye mazaya echando anopenya akatenderera.
Ndiri kufunga kuti nei uchinetseka nekushongedza kana vatengi vasingawanzo kuuya kuhofisi yako? Tumira mifananidzo yezvishongedzo zvako pane ako enhau midhiya kuratidza mweya wako wekupemberera. Iwe unogona zvakare kuita kuti vateereri vako vauye kwauri nekuronga chikafu, chekupfeka kana chekutyaira zvipo. Ipa madhikoni madiki kana zvimwe zvinopihwa mukutsinhana nemipiro inodonhedzwa. Vashandi vako vanogona kubata kurongedza nekutumirwa kwezvipo, uye kana vatengi vakapinda, vanozofadzwa nekushongedza kwako uye vangangotarisa kechipiri masevhisi aunogona kupa.
Imwe bakoat: Kunze kwekunge iwe wamhanyisa matchmaking sevhisi, mistletoe haina nzvimbo muhofisi.
Tags: ita nezvisingaitwezororomakadhi ezororozororo pati